IHipper Dredge Eklanywe ngu-Ellicott Qedela Umsebenzi eMfuleni iMississippi
E-USA: Usonkontileka Wezempi ukuze aqedele i-Long Island Intracoastal Waterway Dredging Eduze neMoriches Bay Reach
Source: Ukushiswa Namuhla
UPaul Howard Construction usebenzisa i-Ellicott® Brand 670 dredge yale phrojekthi.
US Army Corps of Engineers, New York District, usonkontileka waqala isigaba sesibili sokulungiswa kwesakhiwo eMoriches Bay ukufinyelela kwesiteshi sikahulumeni iLong Island Intracoastal Waterway kuleli sonto. UPaul Howard Construction, waseGreensboro, NC, wanikezwa inkontileka eyizigidi ezingama- $ 1.45 ukwenza umsebenzi wokulungisa endaweni yaseMoriches Bay yesiteshi kuya ekujuleni okugunyaziwe kwezinyawo ze-6.
Ukuhlinzeka ngezinsizakusebenza zasolwandle ezibucayi, le projekthi yahlukaniswa izigaba ezimbili ngokuhlanganiswa okuningana. Isigaba sokuqala, esigxile ezindaweni ezisezindabeni zeMoriches Bay nokusatshiswa kakhulu, siqedwe ekuqaleni konyaka ekuqaleni kwentwasahlobo. Isigaba sesibili, isigaba sokugcina, sizophothulwa ekuqaleni kokuwa ngenkathi ukugoqa kabusha kusenzeka emvelweni.
“Sijabule ukuqedela ukungena eMoriches Bay Reach ngokubheka izidingo zokuphepha zomphakathi ezisheshayo, ngokumba kuqala izindawo ezinenkinga enkulu entwasahlobo, nezidingo zendawo ezungezile, ngokuhlukanisa lo msebenzi ngezigaba ezimbili ezizohlalisa ubusika nezinye izinto zasolwandle zasendaweni yemvelo echwebeni, ”kusho uMkhuzi WesiFunda saseNew York uColonel John R. Boulé. "Futhi ekugcineni, lo msebenzi uzosiza ekuhlinzekeni indlela ephephile yokuhamba ngezikebhe ezikebheni kanye nabalingani bethu beFederal ku-Coast Guard."
Cishe i-cubic yards engama-35,000 e-cubic sandts kusuka esigabeni sesibili izosuswa esiteshini futhi ibekwe e-Cupsogue Beach eseduze. Isiteshi sonke seLong Island Intracoastal Waterway Federal Channel si-33.6 amamayela futhi sidlula emanzini angaseningizimu yeLong Island sidlula eGreater Bay Bay, iBellport Bay, iNarrow Bay, iMoriches Bay, iQuantuck Bay, neShinnecock Bay.
Ukulungiswa kwe-Long Island Intracoastal Waterway kwagcina ukwenziwa ngoNovemba 2003 ngoJanuwari 2004. Umthamo ophelele wezinto ezibunjiwe ezisusiwe kwi-Shinnecock Bay Reach ngonyaka wezimali u-2004 wawungamamitha ayi-cubic we-26,085. Ngaphambi kwalapho, ukufinyelela kweMoriches Bay kwakhiwa ngonyaka wezezimali i-2003 ngokususwa kwama-cubic egcekeni we-53,000 we-cubic.
Isifunda saseNew York sibhekele ukuthuthukiswa komthombo wamanzi weCorps of Engineers, navigation, kanye nemisebenzi yokulawula enyakatho-mpumalanga yeNew Jersey, empumalanga naseningizimu enkabeni yeNew York State, kubandakanya neNew York
I-Harbour neLong Island, kanye nezingxenye zeVermont, Massachusetts, neC Connecticut. Lesi siFunda sibuye sibhekele ukuklama nokwakha ezindaweni zokufakwa kwamasosha nempi yezempi eNew Jersey, eNew York, eVirginia nangaphesheya eGreenland.